Ivory Avaratra : Mpianakavy miisa valo maty nihotsahan’ny tany -
AccueilSongandinaIvory Avaratra : Mpianakavy miisa valo maty nihotsahan’ny tany
Olona miisa valo izay nahitana zaza 11 volana monja no indray namoy ny ainy vokatry ny fihotsahan’ny tany, tany Ivory Avaratra , distrikan’i Fianarantsoa ny alin’ny alahady 07 janoary lasa teo. Araka ny fampitam-baovao, dia mpianakavy sy mpiray vodirindrina niaraka niandry faty tao amina trano iray, izay nirodana vokatr’io tany nihotsaka io ireto niharan-doza sy sendran’ny tsy nampoizina ireto. Tampoka no nisehoan’ny loza ka tsy nisy tafavoaka sy afaka nanavotra ny ainy ireto mpiandry faty ireto. Nampandre ireo tompon’andraikitra, izay tonga tany an-toerana avy hatrany moa ny teo amin’ny manodidina, ka teo noho eo ihany dia niroso tamin’ny fitadiavana ireo vata mangatsiaka izay tototry ny tany ireto farany. Tsy nahitam-bokany teo noho eo anefa izany fikarohana izany raha tsy omaly maraina. Ankoatra ilay razana izay efa nandrasana tao an-toerana moa, dia tafavoaka io omaly io ilay zaza amam-bolana niaraka tamin’ireo razana fito hafa. Nandefa iraka avy hatrany ihany koa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina vantany vao naheno ny vaovao ratsy. Nidina ifotony nijery akaiky ny zava-nisy sy nitondra fanampiana, ary lamba hikarakarana ireo vata-mangatsiaka ny minisitry ny fampianarana ambony, Rasoazananera Marie Monique.
Marihina ihany koa fa an-dalana ho any an-toerana ny lehiben’ny faritra sy ny Préfet saingy noho ny lalana tapaka any amin’ny lalam-pirenena fahafito iny, dia mbola tsy tonga tany an-toerana izy ireo tamin’ny fotoana nanoratanay. Fa ankoatra izay, dia olona miisa telo hafa, izay mpianaka ihany koa no namoy ny ainy tany Antanifotsy omaly vao maraina. Araka ny fantatra, dia dimy mianaka izy ireo no niaraka nandeha sarety raha iny hamonjy tsena maraina iny. Navadiky ny rano anefa io fitaovam-pitaterana nandehanan’izy ireo io, ka izao nahafatesana ny telo tamin’izy ireo izao. Amin’ny fotoam-pahavaratra tahaka izao, dia isan’ny mitera-doza ny fiakaran’ny rano. Nanampy trotraka rahateo ny fandalovan’ny andro ratsy AVA. Isan’ny mbola takaitra naterak’iny rivo-doza iny tokoa mantsy izao namoizana mpianakavy maro izao. Na dia efa lasa ihany koa aza iny andro ratsy iny, dia mila mitandrina hatrany ny rehetra satria matetika aorian’ny fandalovan’izany vao misy trangana fihotsahana tany sy firodanana trano. Nentina niaretan-tory tao amin’ny lapan’ny faritra moa ireo razana miisa valo tany Ivory Avaratra ireo, ary atolotra ny fianakaviany anio talata.